Nangona abantu abadala bexhala ngokufuna izipho, abantwana, ngokuphefumula, balinde ubusuku obuhle kunye nezimangalo zonyaka omtsha. Masikuncede umlingo kwenzeke! Kubaluleke kakhulu kumntu omncinane ukuba azi kakuhle ukuba yiziphi iindaba ezenzeka ngokwenene. Le ntembelo ikhokelela ekudaleni ubuchule, ivelisa amandla okuba nemvakalelo kwaye ngokubanzi uluthando lobomi. Unyaka omtsha kunye neKrismesi yiholide kakhulu. Xa ulindele iintsuku ezixabisekileyo, unokwenza umntwana abe nesipho esibaluleke kakhulu. Zama ukufumana ixesha kwi-holiday pre-holiday to create story tale kunye nomntwana. Mxelele into ephambili: unokwenza ummangaliso ngezandla zakho.
Kukho izinto ezidala umoya okhethekileyo kwiNtsha entsha kunye neKrismesi. Bhala ikhadi kunye nomntwana wakho kwizihlobo kunye nabahlobo.
Kule minyaka ye-imeyile yomntwana kuya kuba nesiganeko sonke esiza kuthunyelwa ngeposi kwiimvulophu, zibambe izitampu. Kwaye nangona ukwenza ngoDisemba 31, akunandaba: kukho iholide ezininzi kunye nemimangaliso yonyaka omtsha ozayo.
Yakha ubusuku bentsapho yeminqweno.
Vumela onke amalungu entsapho aguquke atshele oko akulindele kunyaka omtsha. Ungabhala ileta kuwe, ubhale zonke iiloto zentsapho kuyo kwaye unamathele imvulophu kuze kube nguDisemba 31 wonyaka olandelayo. Bhaka nabantwana i-cookie yeKrisimesi okanye ikhekhe. Eli lihleko elihle kakhulu, apho onke amalungu entsapho angathatha inxaxheba. Indlu iya kugcwala iphunga leholide, kwaye iyacaca: ukulinda umlingo akude!
Nangona kukho ixesha elincinci kakhulu eliseleyo kuze kube sebusuku bokugqibela, usenokufumana ixesha lokuba unike indlu ibe yinto yokugubha nomntwana, ukuba awukwenzi oko. Sika ii-snowflakes uze uzihlanganise kwiifestile. Ungalibali ukuxhoma i-kreati yeKrisimasi emnyango kwaye ulungiselele ikhandlela. Into ephambili kukuba le miba encinci yenziwa ngokukhawuleza kwaye efanelekileyo. Kuloo maxesha ukuba inganekwane izalwa emphefumlweni.
Emva koko unako ukusela itiye kunye kwaye uhlale eceleni. Le yithuba leengxoxo ezidityanisiweyo, xa umama engekho ngokukhawuleza kwaye ukulungele ukuphendula yonke imibuzo yomntwana.
Yakha izithethe ezintsha kwintsapho yakho:
Unyaka wonke, kufuneka uthenge i-toy tree entsha. Ngako-ncinane ncinane inqokelela yeentsapho iya kubuthana. Ukuthatha imihlobiso yeKrismesi ngaphandle kwebhokisi, xelela ibhungu ibali labo. Makhele iibhola ezimbalwa kumasebe aphantsi.
Isitoreji ngeendaba zobugqi. Thenga incwadi enhle ngemifanekiso, ukuze yonke imihla evela kwiNtsha entsha ibe yiKrismesi funda ngokuvakalayo okanye imifanekiso yeKrismesi. Unokukhetha ibali elinye ulifunde iintsuku eziliqela ngokulandelana.
Ebusuku uphuma kunye ukuhamba. Kukulungele ukuzulazula nge-boulevards ezigqutywe ngekhephu kwaye ubone ukuhlobisa koMnyaka omtsha wesixeko! Ekukhanyeni kwezitalatyambo kunye nokuqhaqhazela kwezigulane ezijikelezileyo kubonakala kungaqondakali.
Yenza imifanekiso yentsapho ye-movie. Uxoxe ngokumamkela embhedeni, ehlanganiswe ngengubo, kwaye ubukele iipateni zonyaka omtsha kunye nefilimu zengqondo-into enkulu!
Imithetho ye Wizard
Kungakhathaliseki ukuba uthanda kangakanani, unganikeli iimfihla zeeholide kuze kube yimini exabisekileyo. Unokufudumala ukulinda, ucinga ngokuzwakalayo: "Ndiyazibuza into esiza kuyifumana phantsi komthi kulo nyaka?" Kwaye nangona umntwana engazange aziphathe kakuhle ngoDisemba 31, usuku kufuneka luphele ekuxolelaneni. Kwaye ekugqibeleni, siya kukuxelela ngenye inkolelo enhle. EYurophu, kukho isiko nganye ngeveki ukukhanyisa ikhandlela elitsha kwi-Christmas crown. Kukho ezintlanu (ngamanye amaxesha ezine okanye ezithandathu), kwaye nganye ithatha intsingiselo ekhethekileyo. Ukujonga ulwimi lwangatye, abantwana baxelelwa ibali eliphakade lokuzalwa koMsindisi kunye nemimangaliso yonyaka omtsha ... Ikhandlela lokugqibela likhanyisa ngeveki leholide. Kwaye inyanga yonke abantwana bazama ukuthuthumela ngeSonto elitsha ukujonga kwi-wreath ukukhanya okutsha okufanekisela iKrismesi. Emva koko, iiholide zonyaka omtsha kubantwana - lo ngumlingo!
I-Tabo: uchungechunge olususela kwincwadi yaseRoma yaseTrakhtenberg
Amathuba "e-Four Fantastic" anyibilika
Kwividiyo entsha i-Britney Spears iya kutshintshwa ngamatshini
Indlela yokuhlobisa umthi weKrismesi
3 iipuzzle, ezixazululwa kuphela ngabantu abafundeleyo. Nobulumko bakho kwinqanaba?
Ubudlelwane phakathi kwendoda nomthandi womfazi
Indlela yokwenza umntu enze into efunwa ngumfazi?
Isifo sesifo seengqondo: i-nephritis
Iimfashini zeMfashini, iAlumn-ubusika 2016-2017 (ifoto): yiziphi iingubo ze-styles ezona zihamba phambili kwi-2016?
Buyela emsebenzini emva kwekhefu lokubeleka
I-Turkey ihluma imifuno